ချဲလ်ဆီးနဲ့ပွဲမှာ မက်ဂွားယားလုပ်သွားတဲ့ပုံစံဟာ WWEနပန်းပွဲတွေထဲက အကွက်လို့ အီဗရာ ဝန်ခံ – FBV SPORT NEWS
October 25, 2020 By admin Sports News
ချဲလ်ဆီးနဲ့ပွဲမှာ မက်ဂွားယားလုပ်သွားတဲ့ပုံစံဟာ WWEနပန်းပွဲတွေထဲက အကွက်လို့ အီဗရာ
ဝန်ခံ ချဲလ်ဆီးနဲ့ပွဲမှာ မက်ဂွားယားလုပ်သွားတဲ့ပုံစံဟာ WWEနပန်းပွဲတွေထဲက အကွက်လို့ အီဗရာကပြောကြားလိုက်ပြီး ဒါဟာချဲလ်ဆီးဘက်ကို သေချာပေါက် ပယ်နယ်တီပေးသင့်တယ်လို့ ယူနိုက်တက်ကစားသမားဟောင်း အီဗရာက သဘောတူခဲ့ပါတယ် “မက်ဂွားယားဟာဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာလဲ? ဒါဟာသေချာပေါက် ပင်နယ်တီပေးရမှာပါ။ မက်ဂွားယားဟာ အပီလီကျူတာကိုလှဲချခဲ့တာပါ။ သူဟာခုန်ပြီးတော့ အပီလီကျူတာရဲ့ပုခုံး‌ပေါ်ကို သူ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဖိသွားခဲ့တာပါ။” လို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစားသမားဟောင်း ပတ်ထရစ်အဲဗရာကလည်း ပင်နယ်တီပြစ်ဒဏ်ဘောပေးဖို့ သဘောတူသွားခဲ့ပြီး ” မက်ဂွားယားလုပ်သွားတဲ့ပုံစံဟာ WWEနပန်းပွဲတွေကြည့်တဲ့အခါ ဟော့ဟိုဂန်လုပ်တဲ့အကွက်ပါ။” “ဒါဟာသေချာပေါက်ပင်နယ်တီပြစ်ဒဏ်ဘောပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ VARနှင့်ပတ်သက်ပြီး နေ့တိုင်းလိုလိုပြောနေရပါတယ်။ ယခုအဖြစ်အပျက်မှာတော့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ပင်နယ်တီရသင့်တာ အသိအသာကြီးပါ။”လို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဗရာရဲ့အသင်းဖော်ဟောင်း ဂယ်ရီနဗီးဟာလည်း ဒီအပျက်အပျက်ဟာ သီယာဂိုဆေးဗားကရက်ဖို့စ်ကို ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်တယ်ဆိုပြီး VARပြန်ကြည့်တာထက် ပို‌ဆိုးပါတယ်လို့ ဝန်ခံသွားခဲ့ပါတယ်။ ပထမပိုင်းမှာ ချယ်လ်ဆီးအသင်း ဂိုးသမားမန်ဒီဟာ ကိုယ့်ဂိုးကိုယ် ပြန်သွင်းမလို ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ထိုအဖြစ်အပျက်အ‌ပေါ် စိတ်မလှုပ်ရှားခဲ့ပဲ မာကပ်ရက်ဖို့ နှင့် ဂျူအန်မာတာတို့ရဲ့ ကန်သွင်းချက်တွေကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘန်ချေးဝဲလ်ရဲ့free kickကနေတဆင့် ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ပင်နယ်တီဧရိယာထဲ ဂိုးသွင်းယူဖို့အခွင့်အရေးရရှိခဲ့ပေမယ့် ဆီဆာအပီလီကျူတာကို မက်ဂွားယားက ကာကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်သံပြန်ကြည့်ချက်တွေအရ မက်ဂွားယားဟာ အပီလီကျူတာရဲ့ခေါင်းကိုချုပ်ပြီး မြေကြီးပေါ်ဆွဲလှဲဖို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် VARကတော့ ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုပြန်မကြည့်ခဲ့ပဲ ပွဲကိုဆက်ကစားစေခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အဖြစ်အပျက်‌‌ကြောင့် ဟက်ဆင်ဘိန့်ခ်ဟာ အံ့အားသင့်နေခဲ့ပါတယ်။
ချယ်လ်ဆီးအသင်း legendတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဖလွိုက်ဟတ်ဆန်ဘိမ့်ခ်က သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းဟာ စနေနေ့ညရဲ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်အသင်းနှင့်ပွဲစဉ်ပထမပိုင်းမှာ ပင်နယ်တီပြစ်ဒဏ်ဘောရခဲ့သင့်ပေမယ့် ဒိုင်ရဲ့ငြင်းပယ်ခြင်းအပေါ် အံ့အားသင့်မိတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဖလွိုက်ဟက်ဆင်ဘိန့်ခ်က အပီလီကျူတာဟာ လင်ဒီလော့နှင့်မက်ဂွားယားကြားထဲကို ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး မက်ဂွားယားဟာ သူ့ကိုဆွဲလှဲခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ အမှန်တကယ်လည်း သူဟာဆွဲလှဲခဲ့ပါတယ်။ မက်ဂွားယားကို ပွဲထုတ်တာထက် အနားပေးဖို့သင့်ပါပြီ။ အပီကျူတာဟာလည်း ဒီကိစ္စနှငိ့ပတ်သက်ပြီး ဒေါသဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။”လို့ ဂယ်ရီနဗီးကဆိုခဲ့ပါတယ်။
ခြဲလျဆီးနဲ့ပှဲမှာ မကျဂှားယားလုပျသှားတဲ့ပုံစံဟာ WWEနပနျးပှဲတှထေဲက အကှကျလို့ အီဗရာ
ဝနျခံ ခြဲလျဆီးနဲ့ပှဲမှာ မကျဂှားယားလုပျသှားတဲ့ပုံစံဟာ WWEနပနျးပှဲတှထေဲက အကှကျလို့ အီဗရာကပွောကွားလိုကျပွီး ဒါဟာခြဲလျဆီးဘကျကို သခြောပေါကျ ပယျနယျတီပေးသင့ျတယျလို့ ယူနိုကျတကျကစားသမားဟောငျး အီဗရာက သဘောတူခဲ့ပါတယျ။
“မကျဂှားယားဟာဘယျလိုလုပျခဲ့တာလဲ? ဒါဟာသခြောပေါကျ ပငျနယျတီပေးရမှာပါ။ မကျဂှားယားဟာ အပီလီကြူတာကိုလှဲခခြဲ့တာပါ။ သူဟာခုနျပွီးတော့ အပီလီကြူတာရဲ့ပုခုံး‌ပေါျကို သူ့ခန်ဓာကိုယျနှင့ျ ဖိသှားခဲ့တာပါ။” လို့ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါကိစ်စနှင့ျပတျသကျပွီး မနျခကြျစတာယူနိုကျတကျကစားသမားဟောငျး ပတျထရဈအဲဗရာကလညျး ပငျနယျတီပွဈဒဏျဘောပေးဖို့ သဘောတူသှားခဲ့ပွီး ” မကျဂှားယားလုပျသှားတဲ့ပုံစံဟာ WWEနပနျးပှဲတှကွေည့ျတဲ့အခါ ဟော့ဟိုဂနျလုပျတဲ့အကှကျပါ။” “ဒါဟာသခြောပေါကျပငျနယျတီပွဈဒဏျဘောပါ။ ကြှနျတောျတို့တှဟော VARနှင့ျပတျသကျပွီး နေ့တိုငျးလိုလိုပွောနရေပါတယျ။ ယခုအဖွဈအပကြျမှာတော့ ခယြျလျဆီးအသငျးဟာ ပငျနယျတီရသင့ျတာ အသိအသာကွီးပါ။”လို့ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။အဲဗရာရဲ့အသငျးဖောျဟောငျး ဂယျရီနဗီးဟာလညျး ဒီအပကြျအပကြျဟာ သီယာဂိုဆေးဗားကရကျဖို့ဈကို ပွဈဒဏျကြူးလှနျတယျဆိုပွီး VARပွနျကွည့ျတာထကျ ပို‌ဆိုးပါတယျလို့ ဝနျခံသှားခဲ့ပါတယျ။ ပထမပိုငျးမှာ ခယြျလျဆီးအသငျး ဂိုးသမားမနျဒီဟာ ကိုယ့ျဂိုးကိုယျ ပွနျသှငျးမလို ဖွဈခဲ့ပမေယ့ျ ထိုအဖွဈအပကြျအ‌ပေါျ စိတျမလှုပျရှားခဲ့ပဲ မာကပျရကျဖို့ နှင့ျ ဂြူအနျမာတာတို့ရဲ့ ကနျသှငျးခကြျတှကေိုကာကှယျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဘနျခြေးဝဲလျရဲ့free kickကနတေဆင့ျ ခယြျလျဆီးအသငျးဟာ ပငျနယျတီဧရိယာထဲ ဂိုးသှငျးယူဖို့အခှင့ျအရေးရရှိခဲ့ပမေယ့ျ ဆီဆာအပီလီကြူတာကို မကျဂှားယားက ကာကှယျသှားခဲ့ပါတယျ။
ရုပျသံပွနျကွည့ျခကြျတှအေရ မကျဂှားယားဟာ အပီလီကြူတာရဲ့ခေါငျးကိုခြုပျပွီး မွကွေီးပေါျဆှဲလှဲဖို့ လုပျဆောငျခဲ့တာကိုတှေ့ခဲ့ရပါတယျ။ သို့ပမေယ့ျ VARကတော့ ထိုအဖွဈအပကြျကိုပွနျမကွည့ျခဲ့ပဲ ပှဲကိုဆကျကစားစခေဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါ အဖွဈအပကြျ‌‌ကွောင့ျ ဟကျဆငျဘိန့ျချဟာ အံ့အားသင့ျနခေဲ့ပါတယျ။ ခယြျလျဆီးအသငျး legendတဈဦးဖွဈတဲ့ ဖလှိုကျဟတျဆနျဘိမ့ျချက သူ့ရဲ့အသငျးဟောငျးဟာ စနနေေ့ညရဲ့ပှဲကောငျးတဈပှဲဖွဈတဲ့ မနျခကြျစတာယူနိုကျအသငျးနှင့ျပှဲစဉျပထမပိုငျးမှာ ပငျနယျတီပွဈဒဏျဘောရခဲ့သင့ျပမေယ့ျ ဒိုငျရဲ့ငွငျးပယျခွငျးအပေါျ အံ့အားသင့ျမိတယျလို့ဆိုခဲ့ပါတယျ။
ဖလှိုကျဟကျဆငျဘိန့ျချက အပီလီကြူတာဟာ လငျဒီလော့နှင့ျမကျဂှားယားကွားထဲကို ဝငျရောကျခဲ့ပွီး မကျဂှားယားဟာ သူ့ကိုဆှဲလှဲခဲ့တယျလို့ပွောခဲ့ပါတယျ။ အမှနျတကယျလညျး သူဟာဆှဲလှဲခဲ့ပါတယျ။ မကျဂှားယားကို ပှဲထုတျတာထကျ အနားပေးဖို့သင့ျပါပွီ။ အပီကြူတာဟာလညျး ဒီကိစ်စနှငိ့ပတျသကျပွီး ဒေါသဖွဈနပေါလိမ့ျမယျ။”လို့ ဂယျရီနဗီးကဆိုခဲ့ပါတယျ။
ဗန်ဒီဘိခ်ကိုမသုံးလို့ မေးခွန်းထုတ်တဲ့ အီဗရာနဲ့ ဂယ်ရီနဗီးလ်ကို တုံ့ပြန်စကားပြောလိုက်တဲ့ဆိုလ်းရှား